Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » I-Emirates kunye neGulf Air: alusekho ukhuphiswano?
Airlines • uhambo ngomoya • Iindaba zeBahrain Breaking • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • iindaba • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba eziHlangayo ze-UAE
I-Emirates isebenza ukusuka eDubai, UAE, ngelixa iGulf Air ikomkhulu eBahrain. Bobabini abathwali baxhomekeke kuhambo lokuhamba. Isalathiso sokuqala sentsebenziswano kwaye mhlawumbi ngaphezulu siyavela kwiDubai Airshow.
I-Emirates kunye neGulf Air zisayine iMemorandam yokuQonda (i-MoU) ukuphuhlisa intsebenziswano yezorhwebo enzulu phakathi kwabathwali bobabini.
I-MoU iza kumisela isakhelo phakathi kwabathwali bobabini ukuseka intsebenziswano enokubakho ye-codeshare kuwo wonke uthungelwano lwesikhululo seenqwelomoya ngasinye, sandise izibonelelo zokunyaniseka zokubuyiselana kwi-Emirates' Skyward kunye ne-Gulf Air's Falconflyer.
Iingxoxo nazo ziyaqhubeka ukuqalisa intsebenziswano yomthwalo.
Isayinwe kusuku lokuqala lweDubai Airshow, i-MoU iya kuphawula ukuqala kobudlelwane obusondeleyo phakathi kwezi nkampani zimbini zeenqwelo moya. I-MoU yatyikitywa nguMhlekazi uTim Clark, uMongameli we-Emirates Airline kunye neBambela leGosa eliyiNtloko lesiGqeba seGulf Air uKapteni Waleed AlAlawi. Umsitho wokutyikitya uzinyaswe ngamalungu eqela ngalinye elilawulayo lenkampani yeenqwelomoya.
Abathengi abahamba ngeenqwelomoya eziqhutywa yi-Emirates kunye neGulf Air banokubhukisha uhambo lwetikiti elinye ngeemali ezikhuphisanayo, kunye nokungena komthwalo omnye ukuya kwiindawo zabo zokugqibela. I-Emirates iya kuqala ukubeka ikhowudi yayo yokuthengisa "EK" kwiinqwelomoya eziqhutywa yi-Gulf Air phakathi kwe-Bahrain ne-Dubai, kwaye ngokuphindaphindiweyo, i-Gulf Air iya kongeza ikhowudi yayo ye-"GF" kwiindlela ze-Emirates.
UMhlekazi uTim Clark, uMongameli we I-Emirates Airline yathi: "Siyavuya ukusebenzisana ne-Gulf Air ekuphuhliseni esi sivumelwano se-codeshare, esiza kunika abathengi ukhetho olwandisiweyo, iishedyuli ezifanelekileyo, kunye nokuguquguquka kokunxibelelana phakathi kwe-Dubai ne-Bahrain, nangaphaya kwezixeko kuthungelwano lwethu olude olude. . Sikholelwa ukuba intsebenziswano yethu entsha iza kuzisa iingenelo zokwenyani kubathengi nakwishishini lethu, kwaye isivumelwano sanamhlanje linyathelo elilungileyo kwintsebenziswano yethu, kwaye sisendleleni yokuqinisa ngakumbi ubudlelwane bethu kwixesha elizayo.
Ngexesha lomsitho, Umphathi obambeleyo weGulf Air uthe: “Oku iya kuba yintsebenziswano ephawulekayo phakathi kwenye yeenqwelomoya zokuqala kwingingqi yeGulf kunye nenye yezona zithuthi zinkulu emhlabeni. Siyazingca ngokuphonononga amathuba kunye ne-Emirates ukwandisa ukufikelela kwethu kwaye kwangaxeshanye sandise iinkonzo zethu ze-boutique kubakhweli be-Emirates xa bebhabha kwinethiwekhi yethu. I-Gulf Air kunye ne-Emirates ziqhuba iinqwelomoya ezininzi phakathi kwe-Bahrain ne-Dubai kwaye esi sivumelwano siza kubonelela abakhweli ngokhetho oluninzi ngaphaya kwee-hubs zethu. "
Nje ukuba i-codeshare isebenze, abathengi baya kuba nakho ukubhukisha uhambo lwabo ngeenqwelomoya zombini emirates.com kwaye gulfair.com, ngeearhente zokuhamba nge-intanethi kunye neearhente zokuhamba zasekuhlaleni.